Indlela yokuhweba phambili isikhathi eside - Eside phambili
Bempahla isikhathi eside kwa. Isibonelo, ama- app asheshayo angashintshi isithombe sangemuva somsebenzisi noma ukudala iwijethi yesikrini sasekhaya. Kodwa wena ukuhweba forex for isikhathi eside, kwenza umqondo ophelele ukubeka engozini iphesenti encane ye- akhawunti yakho yokuhweba emsebenzini ngamunye. 7, uma kuqhathaniswa ngemali ebiqageliwe ukuthi izokwenziwa.
Abantu abaningi bathola ukuthi ukuziphatha kwabo okuvamile akuyona indlela enhle yokunquma ukuthi bazohweba kanjani; labo ngokuvamile " abapholile njengekhukhamba" ngaphansi kwengcindezi bangase bazithole behlaselwa lapho bebhekene nokutshalwa kwezimali okulahlekelwayo. Imigomo Encanyelwayo Yokuhweba Nabasabalalisi.
Ama- app asheshayo akufanele enze izinguquko kudivayisi yomsebenzisi ebekezela isikhathi eside kunesikhathi se- app esheshayo. Akukho ngxenye yalesi sishicilelo engaphinde igaywe nganoma iyiphi enye indlela.
Isizathu esilula: saso singathatha abaningi kangaka ukulahlekelwa imifula ukushaya i- akhawunti yakho ye- forex yokuhweba. In forex aisu lokuhwebauhlelo oluhleliwe olwenzelwe ukubuyisela ukubuyisela inzuzo ngokuhamba isikhathi eside noma esifushane ezimakethe.
Izizathu eziyinhloko ukuthi isu lokuhweba elicwaningwe kahle lisiza ukuthi liqiniseke, liqiniseke, lihambisane, futhi libhekele phambili. Uzohamba amakhilomitha angama- Sterling njalo ngesonto, ngaphesheya kwendawo yokuhweba, ukuthatha izithombe zesayithi yokwakha okwathi kamuva waba yindawo yezemidlalo eyaziwa kakhulu e- Great Britain.
Kuthathe isikhathi eside kunalindelekile kodwa, phambi kwamehlo kaSterling, iWembley Stadium entsha yaqedwa. Amasayithi like RentNotBuy futhi Loanables wenze lokhu.
Futhi akubhekiwe ukuthi ezokuvakasha, indlela yesibili yokukhulisa umnotho, ecatshangelwa ukuthi ingakhulusa umnotho ngamaphesenti aphakathi kuka0. I- Panama ne- Colombia namuhla bahlele umgwaqo wokuqeda ukuphikisana kwezebhizinisi okude isikhathi eside okuye kwavimbela ubudlelwane phakathi kwamanye amazwe, futhi nokuqhubela phambili iphrojekthi ye- ambitious kokuxhumeka kagesi phakathi kokubili.
6 Vesuvius INqubo YokuziPhatha 7 Ukuhweba, Amakhasimende, Imikhiqizo kanye Nemisebenzi 02 Kumqoka ukwakha ubudlelwano besikhathi eside obuhle namakhasimende ukuze sikwazi ukufeza izimpokophelo zethu. Indlela yokuhweba phambili isikhathi eside.
Uma une closet egcwele izingubo ungazange igqoke isikhathi eside, waziklebhula out. Uma they bengakwamukeli kusaba noma ayimfanele yokuphila yakho yamanje ukuwafaka ukudayisa egalaji noma kuthengiswa online okukhulunywe ngalo ngenhla.
Uhlelo oluhlelekile lokuhweba pdf